Uvule isikhungo sokwelapha
AKATHANDANGA ukusebenza kuhulumeni isikhathi eside uNksz Noxolo Ndlovu ongumhlengikazi osevule isikhungo sokwelapha KwaNongoma
ZANELE MTHETHWA | November 28, 2019
UFUNA ukuba yisibonelo kwabanye ozakwabo ukuze bafunde ukuzimela umhlengikazi osevule indawo asebenzela kuyona KwaNongoma.
UNksz Noxolo Ndlovu (27), usebenze iminyaka emithathu njengomhlengikazi ngaphambi kokuvula isikhungo sakhe esibizwa nge-Ulindiwe Health.
Esikhungweni esivulwe ngokusemthethweni ngo-Okthoba kwenziwa konke okuphathelene nezempilo okubalwa ukuhlolwa izifo, ukusizwa kwabakhulelwe nezingane, ukuthathwa kwegazi, ukwenziwa iPap Smear nokunye.
“Kwakuvele kuyisifiso sami ukuthi ngingasebenzi isikhathi eside kodwa ngisheshe ngizimele. Isifiso sami esikhulu ukuba nesikhungo esikhulu esizofana nesibhedlela kwenziwe yonke into. Ngibone kungcono ngiqale ngalesi sikhungo ukusiza abasebenzayo abangenaso isikhathi sokuyobamba olayini abade emitholampilo,” kuchaza uNksz Ndlovu.
UNksz Ndlovu ubesebenza emtholampilo ongumahamba nendlwana ongaphansi kwesibhedlela iBenedictine khona KwaNongoma. Ushiye emsebenzini ngoSepthemba nonyaka esebona ukuthi useyaphumelela ukuqala isikhungo. Uthe izifundo azenzile zimvule amehlo zamcija ngokuthi angazimela. Uthe ubone ukuthi kuyadingeka ukuba nesikhungo esizimele ezindaweni ezisemakhaya. Ubuye wathi abantu baKwaNongoma bekudingeka baye eMpangeni uma befuna isikhungo esizimele esifana nesakhe. Esikhungweni sakhe kusetshenziswa namaMedical Aid futhi usebhalise kuzo zonke izinhlaka zezempilo. Utshele Isolezwe ukuthi usebenzise imali yakhe abezibekela yona evula isikhungo ngoba bekudingeka athole nemishini yokusebenza.
“Kulula ukuvula isikhungo esifana nalesi wukuthi nje abantu bashoda ngolwazi. Okunye okuyinselelo wukuthi uma uzimele usuke usuphethe ibhizinisi kanti abantu bayesaba ukuthatha amashansi. Ngiyafisa ukuthi nabanye ozakwethu bazimele ngoba ngeke sonke sithembe ukuthi sizoqashwa wuhulumeni,” kusho uNksz Ndlovu.
UNksz Ndlovu, ofundele nokubelethisa, uthe uyafisa ukuqhubeka nalo msebenzi uma esevule isikhungo esikhulu. Ufundele ukweluleka ngokomqondo nokuhlola abantu izifo eziphathelene nomqondo.
Uthe okwamanje akayikhiphi imithi namaphilisi ngoba usalinde ilayisensi emgunyazayo. Maduze uzobe eselapha ngokugcwele nezinye izifo ezidinga imishanguzo.
Mayelana nolwazi lwebhizinisi uthe kudingeke enze ucwaningo ngaphambi kokuqala isikhungo sakhe. Uveze nokuthi luyadingeka nothando lwebhizinisi obekuyinto engaphakathi kuye. Ufisa ukuvula amathuba omsebenzi entsheni esemakhaya. Okwamanje uqashe owesifazane oyedwa obamba izingcingo.
UNksz Ndlovu uneziqu zeBiochemistry & Microbiology zase-University of KwaZulu-Natal. Uke wahlaba ikhefu ngo-2011 emuva kokushona kukanina kwadingeka abheke ikhaya. Ubuye wenza iDiploma in Nursing KwaZulu-Natal College of Nursing eMgungundlovu wathweswa iziqu ngo-2015.